Ifumaneka kwihlathi elisecaleni kwedama elineentlanzi ezidlalayo, indlu enomoya wentsomi kunye nomtsalane we-fairytale charm, ibandakanya wena kwelinye ilizwe elikude nenkqubo yemihla ngemihla yanamhlanje. Ibunjwe ngokuzolileyo nangononophelo ngezinto ezithathwe ngokuthe ngqo kwindalo, kwaye ihloniphe ngokupheleleyo imilo yokhuni, xa unyathela embundwini wayo kuba ngathi ihlathi liya kukwamkela!
Iindawo e-Coliba zimbini kuphela okwangoku, kodwa abo banomdla ngakumbi banokulala ententeni (iintente ezi-4-5) kwi-terrace yepropati (i-10 lei ngomntu ngamnye).
Le ndlu yayikumda ophakathi kwelali kunye nehlathi elishinyeneyo elikwi Valley Valley. Akukho wi-fi, kodwa ngophawu oluninzi kwiinethiwekhi zefowuni.
I-hut ayixhunyiwe kumbane, kodwa ukukhanya ebusuku kunye nokutshaja iifowuni kwenziwa nge-10w inkqubo ye-photovoltaic.
Njengesikhenkcisi sokutya sinekhreyithi efakwe kwi-thermal insulated nomkhenkce.
Ukuba uza nentente yomntu sinendawo ekhethekileyo yokumisa inkampu, kukho indawo yeentente ezi-4-5. (Iiyure ezili-10 / umntu)
Iindwendwe zisenokonwabela umdlalo wedayi, ibhola yevoli, ipoker, chess okanye i-backgammon ukuba imozulu yangaphandle imnyama, neti eshushu. Kwabo banomdla, sibonelela nge-rock kunye ne-roll yokukhangela igolide ye-alluvial (qaphela: andikavavanyi umlambo) okanye i-yoga mat. Indawo igcinwe ngokusisigxina nguTomitza, ikati kaColibei, ikwanguye oya kukugcina inkampani ngexesha lokuhlala kwakho.
Andikukhuthazi ukuthengwa okanye ukuthengwa kweemveliso zemveli zasekuhlaleni okanye iziselo ezinxilisayo kumafama kuba abanaxanduva lokulungiselela, nakuphi na ukungezwani okanye ukunganyamezeli komzimba kwezi mveliso.
Kwakhona, njengesicelo, ndingathanda ukuba ungabaniki abantu basekuhlaleni iinkcukacha malunga nendlela yokuhlala kweli qonga.
Ndiyathanda ukusebenzisana neendwendwe kwimida yobudlelwane babo obusondeleyo, enyanisweni ndivulelekile kwiihambo esinokuziququzelela kunye kwiindawo ezingqongileyo, kumda wexesha lam lokukhulula.